Mogadishu Journal » Xassan Sheekh” in ka badan 300 oo xildhibaan ayaan dhawaan fariisinaya
Xassan Sheekh” in ka badan 300 oo xildhibaan ayaan dhawaan fariisinaya
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud oo Maanta Shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho, ayaa sheegay in 15-ka bishaan uu furmi doono Kal-fadhigii 1-aad ee Barlamaanka cusub ee Soomaaliya, Wuxuuna ku baaqay in si deg-deg ah loogu Gurmado Shacabka ay Abaaruhu Saameeyeen.
Xasan Sheekh ayaa sheegay inay guul weyn tahay in ka badan 300 oo mudane oo isugu jira kuwa Aqalka Hoose iyo Sare ee baarlamanka Somalia ay ay dhawaan hawlahooda billaabi doonaan.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyo badan lagu soo dhameystiro diiwaan-gelinta Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Somalia si ay hawlahooda shaqo u gudo-galaan.
Madaxweynaha Somalia ayaa hadalkiisa ku daray in dagaalka Somalia ay ku jirto uu yahay mid caalami ah kaasoo dhan ka ah arga-gixisada, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay Qaybtooda ka qaataan Dagaalkaas.
“In Somalia ay 47-sano kaddib doorashooyin ka dhacayaan waa arrin guul ah, taasoo lagu gaaray biseylka siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku taallaabsatay, Waxaana ku Ammaanayaa Maamul-goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka sida ay u guteen Waajibaadkooda,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa intaas ku daray. “Qorshaheennu waa in fadhigii u horreeyay ee Labada Aqal ee Cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya uu furmi doono 15-ka bishan, Gacantana lagu hayo Hawshaas, wuxuuna faray maamulka Baarlamaanka inay dadajintaan Qabsoomidda kal-fadhiga koowaad oo ay dhaarinta xildhibaannada ay ka mid tahay.”
Dhanka kale, Madaxweynaha Somaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gacan siiyaan walaalahooda ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen.
Ugu dambeyn, Hadalka Xasan sheekh ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli Somalia ay wajaheyso doorashada Madaxweynaha Cusub oo dhici doonta dhamaadka bishan lagu jiro ee December iyo Abaaro saameyn weyn ku yeeshay shacabka Soomaaliyeed.
Riyad Mahrez oo ku guuleystay Abaal marinta ee Ciyaaryahanka Afrika 2016
Xildhibaannada cusub ee labada aqal oo bilaabay in ay qaataan shahaadooyinkii aqoonsiga
Xildhibaanno lagu eedeeyay in ay doonayaan sii deynta dadkii dilay Axmed Dowlo by Ahmed Cali - Mon Sep 24th 14:53:49
Ciidamo ka tirsan Puntland oo lagu toogtay Boosaaso by Ahmed Cali - Mon Sep 24th 10:04:49
Ronaldo iyo Messi oo aan soo xaadiri doonin xafladda FIFA by Ahmed Cali - Mon Sep 24th 8:13:49
Madaxweyne Farmaajo oo mar kale ku guul dareystay qabashada shir uu ku baaqay by Ahmed Cali - Mon Sep 24th 7:00:55
Al-Shabaab oo xalay weerar culus ku qaaday Qoryooley by Ahmed Cali - Mon Sep 24th 6:10:26